Yusuf Garaad: Saaddiq iyo Samatar
Laban nin oo aan saaxiib nahay ayaa isku dhacay oo Telefishinka hortiisa khilaaf ku dhex maray. Haddii aan adeegsado afka ciyaalka xaafadda, col ayay kala goosteen.
Waa Saaddiq Warfaa iyo Prof. Axmed Samatar. Waxay is qabteen, ka dib markii uu Saaddiq Warfaa oo daaddihinayay Doodda Fagaaraha uu damcay in uu joojiyo Prof. Samatar oo hadalku dhexda u marayo.
Dooddu waxay ka dhacaysay Mareykanka waxayna ku saabsanayd Aayaha Somaliland. Saaaxiibbo aan badneyn ayaa i weydiiyay sida aan u arko iyo labada midka khaladka leh.
Anigu labada midna lama hadal. Cid kale oo goobjoog ahaydna lama hadal. Waxa aan wax ka dhihi karaa waa keliya waxa ay isha Kaameradu ay i tustay. Oo dabcan lagu kabay khibraddeyda qabanqaabada iyo hagidda doodaha iyo weliba aqoonta aan u leeyahay labada nin ee is qabtay.
Sababta aan uga hadlayaa ma aha iyaga in aan barteyda ugu garnaq is leeyahay. Waa in aan hagidda doodaha iyo weliba ka qeyb qaadashadeeda aan wax uga bidhaamiyo weriyayaasha Soomaaliyeed kuwooda aan ku doobba dillaacsan iyo dadweynaha guud.
Waxaan tusaale u soo qaadanayaa dhacdadan oo dad badani ay saxaafadda bulshada ku hadal hayaan. Waxaan soo qaadi doonaa waxa aan arkay, sax iyo khalad waxa meesha ka dhacay sida aan u arko iyo waxa aan is leeyahay waa loo baahnaa in ay dhacaan.
Marka hore aan tilmaamo Saaddiq iyo Samatar iyo Fagaaraha inta aan ka aqaan.
Saaddiq Warfaa oo aan isku barannay Muqdisho, waa nin maskax furan oo dadaal weyn haya. Wuxuu isu xil saaray in uu qaban qaabiyo doodo laga sii daayo TV iyo Youtube. Doodayaasha waxaa mar kasta wehliya dadweyne goobjoog ah oo doodda uga qeyb qaata sacab, su’aalo iyo falcelis. Doodihiisuna waa kuwo macna sameynaya oo in badan oo naga mid ah u ifiya hadba mowduuca la gorfeynayo.
Aniga wuxuu hadda ka hor igu casuumay oo aan kala qeyb galay Fagaaraha 8aad oo Muqdisho lagu qabtay.
Howsha uu wado oo aan culeyskeeda qiyaasi karo darteed, waan ku dhiirri geliyay dadaalkiisa, waxaanna u sheegay in wixii uu gacan iiga baahdo xag aqoon iyo farsamo aan diyaar ula ahay.
Prof. Samatar, waa aqoon yahan bad ah. Codkar hadalyaqaana ah. Shaqo ka billaabay weriyennimo. Macallin iyo cilmi baare ah oo dooddiisu ay xubneysan tahay.
Barnaamijyo aad u tiro badan iyo wareysiyo ayaan wadayeelannay oo xataa mar isagu igu wareystay Bildhaan oo uu isagu Tifatire ka yahay.
Labadu waa niman is yaqaan, waxaana kuu muujinaya sida Samatar uu furitaanka hadalkiisa u ammaanay Saaddiq, oo uu ku tilmaamay ma-daale, arkaya sawirka weyn.
Sida ay wax u dheceen
Samatar oo shaashadda keligii taagan oo hadalkiisa bartamaha uga jira, hadalkana wuu ku raaxeystaaye ogow, ayaa Saaddiq soo garab istaagay, oo inta uu waraaq ka soo goostay buug meesha yiil, billaabay in uu qalin ku qoro xarfo afar igala badnaa igala badnaa. Markaas ayaan anigu wel wel billaabay.
Markii uu waraaqda hor dhigay, ayuu Samatar muujiyay in uu la yaabay, kana xanaaqay. Waxa waraaqda ku qoran isha Kameradu ma arag, waxaanse Samatar ka fahmay in ay ku qornayd STOP.
Samatar wuu aamusay oo aayar fariistay kursigiisa. In yar ka dibna wax buu soo gocday. Inta uu istaagay ayuu mikrofoon la’aan dadka ku wargeliyay in aanuu hadalkiisa dhammaysan. Laba nin ayaa halhaleel u soo istaagay. Saaddiq ayay si akhyaarnimo ah ugu khasbeen in uu u daayo in Professorku uu dhammeysto hadalkiisa.
Saaddiq wuu yeelay. Odayaashiina waxay Samatar ku soo celiyeen mikrofoonka.
Marka hore waraaqihiisa oo qaar dhulka ku dheceen ayuu soo urursaday, isu celceliyay oo si uu u simo salka miiska ugu dhuftay, asaga oo aad arkeyso in uu xaaladda qiyaasayo. Meeshii uu marayay ayuu goob goobay. Muuqaalka dhacayna ma ahayn mid qurxoon oo dabcan wuu saameeyay shucuurtiisa, sida aan qiyaasayana wuxuu kordhiyay garaaca wadnihiisa, oo isaguna kor u qaaday xawaaraha dhiiggiisu ku wareegayo xididdada.
Wuxuu hadalka ku billaabay, isaga oo Saaddiq ka hadlaya, “Dood culus ayuu noo abuurayaa, markaasaanuu garaneyn sida doodda loo maamulo”. “Ma ahan wax la aqbali karo” ayuu daba dhigay.
Axmed waxaa u soo baxday in sidii uu doonayay laga jiiray oo aanuu hadalka u sii wadi karin siiqadii iyo xalladdii looga bartay uguna ugu soo talo galay. Markaas ayuu cudur daartay oo wuxuu ku laabtay kursigiisii oo iska fariistay.
Dhowr jeer oo ay dadku su’aalo weydiiyeen, wuxuu ku gaabsaday in haddii uu dhammaysan lahaa dooddiisa, ay su’aalaha qaarkood jawaabtoodu ay halkaas ku jiri lahayd.
Mar dhexena wuu istaagay oo qolka ka baxay, isaga oo Saaddiq cod hoose ku yiri, wax aan u fahmay, “labadeenna wey noo kala dhammaatay”.
Maxay habboonaa in ay dhacaan?
Midig: YG, Xoosh, Faarax, Buubbaa, Saaddiq & Madeer.
Saaddiq waxay ahayd in uu marka hore ku soo adkeeyo ka qeyb galayaasha doodda in uu wakhtigu yahay lagama gudbaan, qof hal daqiiqad ku darsan karaana aanuu jirin. Welibana uu ku celceliyo oo u laqimo afarta doodaa inta aan goobta la soo fariisin. Marka ay fariistaan uu mid mid u xusuusiyo. Waa laga yaabaa in uu sidaa yeelay.
Waraaqda uu qorayo waxay ahayd in ay ahaadaan laba xaashiyood oo bixinaya digniino laba wakhti oo sii kala yar. Tusaale ahaan mid u sheegeysa in 5 daqiiqo ay u hartay, aakhirkana ay midda kale u sheegto in 1 daqiiqo ay u hartay. Jeebkana waa in ay ugu jirtaa daqiiqad amaba laba, haddii ay Baraka ma leh gaarto, uu ugu dari karo. Waxayna ahayd in waraaqahaas uu soo diyaarsado ka hor inta aan dooddu billaaban. Haddii uu illoobay, waxay qurxoonaan lahayd in uu ku qoro meel aan u muuqan qofka hadlaya.
Marnaba meesha ma aanay qaban aqoonyahan weyn oo arrin xasaasi ah ka hadlaya in mar qura STOP la soo hordhigo.
Midda saddexaad, marka uu Samatar carooday laakiin hadalka joojiyay oo fariistay, Saaddiq wuxuu bixiyay raalli gelin guud. Wuxuu sheegay in uu xushmad u hayo Professorka iyo inta meesha fadhida, Meeshaas in uu arrinka ugu haro ayay ahayd. Ma habbooneyn in Samatar oo u marti ah, oo hadalku ku bargo’ay, oo careysan, uu ka daba-geeyo oo uu cashar ku siiyo mikrofoonka. “Caddaaladda waa loo baahan yahay in xataa Professerrada iyo qof kasta oo halkan taagani in ay fahmaan”.
Muranka, is jiijiidka iyo isu jawaabidda waxaa ku luntay in ka badan laba daqiiqo. Marka warbaahin laga hadlayana laba daqiiqo oo luntay ma ahan laba daqiiqo oo keliya ee waa wakhti aad uga badan.
Waxaa igala habboonayd in jawaabtu ay ahaato raalli gelin iyo u madax weyneyn Professorka oo oraneysa. Tusaale: aniguba waan jeclaa in aan sii dhegeysto Doodda Samatar, laakiin sidii aan billowgii barnaamijka idiin sheegay wakhti is le’eg ayaan u qoondeyay afarta doodaa. Waxaan rajeynayaa in gunaanadka iyo jawaabaha su’aaluhu ay u noqon doonaan fursad kale.
Samatar waxaan ku aqaan in uu weliba aad ugu wanaagsanaa dhowridda wakhtiga loo qabto. Ma ogi waxa ku dhacay. Wuxuu runtii muujiyay dulqaad xumo. Laakiin in uu wakhtigiisa dhowri waayay waxaa iiga muhiimsanayd sida aan qurxooneyn ee uu u dhaqmay oo martidii ka soo qeyb gashay iyo inta aan anigu ka mid ahay ee daawatay ay ugu hungoobeen. Welibana ay ku sigatay in dooddu ay burburto. Xataa haddii uu Saaddiq ka ba’naa, waxay ahayd in uu dadweynaha xushmeeyo, aragtideyda. Kelmadda uu goobta ka yirina ma habbooneyn lamana joogin golaheega.
Maxaa wanaagsanaa ee meesha ka dhacay?
Waa mar e, iyada oo doodaa miisaan leh uu meesha ka kacay, in haddana aan barnaamijku burburin ee uu halkiisii ka sii socday waxay ahayd wax aad u sarreeya.
Taas waxaan ammaanteeda siinayaa waa marka koowaade, Maxamed Ismaaciil oo ay isku jaal ahaayeen Samatar oo Somaliland gooni isu taaggeeda ay qiil u sameynayeen. Wuxuu awooday in uu ka istaago isaguna. Laakiin muu sameyn ee wuxuu u bareeray in uu keligii u babac dhigo Prof. Xuseen Warsame oo ah aqoon yahan, xog ogaal ah, wax bandanna af iyo qoraalba ka yiri Soomaaliya, iyo Geeldoon, oo aad mooddo in dood lagu anqariyay, uuna ku takhasusay, ma ahan keliya, sida dadka wax loogu sheego ee ku darsaday sida dadka xamaasad loogu kiciyo.
Waxaa kale oo aan ammanteeda siinayaa ka qeyb galayaasha, waa inta ii muuqataye, oo aan buuq abuurin ee si deggan barnaamijka uga qeyb qaatay.
Dadaalka ugu weyn ee suurta geliyay in Barnaamijku uu gebagebadiisa gaaro iyada oo aan waxa dhacay loo istaagin waxaa iska leh, Saaddiq Warfaa, oo aan filayo in isagana uu dhiiggu ku kacay, maaddaama dood oo marka horeba abaabulkeeda iyo hagiddeedu ay dhib badan yihiin haddana khilaaf aad loogu jeedo uu meesha ka dhacay.
Waxaan jecleystay markii la gaaray gunaanad, oo ay Samatar soo gaartay, in Saaddiq uu ku marti qaaday, laakiin Professorku uu diiday. Ka dib markii su’aal la weydiiyeyna, Saaddiq hore ugama socone, haddana Samatar ayuu si xushmad leh ugu marti qaaday in uu ka jawaabo. Sidii oo kale ayaa dhacday.
Saaddiq, dib ayuu u dhigtay caradiisa, Barnaamijkana sida ugu wanaagsan ee gunaanadkiisa lagu gaarsiin karay, ayuu ku gaarsiiyay. Taasi waxay khilaafkii dhacay ay u rogtay, mid hadal heyntiisu ay kor u qaaddo daawashada Barnaamijka iyo ka faalleyntiisa oo ay qormadani ka mid tahay.
Posted by Yusuf Garaad at 09:08:00